10 Soso-kevitra fomba handaminana ny Hand entana | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Soso-kevitra fomba handaminana ny Hand entana
Na inona na inona ny halavan'ny ny diany - ho azy ho faran'ny herinandro amoron-dranomasina getaway na dia Himalaya mandritra ny telo herinandro - mila manangona kitapo misy habe ianao, ary ho tianao ny hahafantatra ny fomba handaminana, ato amin'ity bilaogy ity dia hifantoka amin'ny valizy am-pelatananao izahay. Misy be dia be ny mandinika rehefa fanapahany hevitra ny mba hitondra: ny karazana sy ny halavan'ny ny diany, ny faritany haleha izy, ny toetrandro, ny habeny ny entana, ary misy lanjany ny fetra napetraky ny fomba fitaterana. Ary tamin'ny lafin-javatra be dia be amin'ny lalao, izany dia mora ny overpack na eo ambanin'ny entana, indrindra fa raha efa niandry hatramin'ny minitra farany. Aza overpacking, nandavaka ny alalan 'ny harona sy ny nanahirana, rehefa niditra ny lamasinina miaraka ireo 10 torohevitra mikasika ny fomba handaminana ny tananao entana.
Ahoana no mandamina ny entany Hand Soso-kevitra 1: Foana ny Travel Documents Hahasaraka
Izany no iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra mba handinika rehefa hanapa-kevitra ianao ny fomba handaminana ny tananao entana. Ataovy ny Travel taratasy manasaraka. Tsy vitan'ny hoe mety izany ny zavatra tokony hatao, fa azo antoka ihany koa ny zavatra tokony hatao. Hataony ao anaty kitapo kely izay mora ny hanala ny tananao entana. Amin'izay tsy voatery nihady isaky ny mila ny pasipaoronao, tapakila na ny vola.
Alamino ny Hand entany Soso-kevitra 2: Manaova fonosana List
Passport? Taratasim-bola. borosy nify? Taratasim-bola. Sunscreen? Fa fiadanan-tsaina izay efa nahazo ny tena ilaina voasarona, manao ny tenanao lisitra fitsangatsanganana andro vitsivitsy talohan'io!
Alamino ny Hand entany Soso-kevitra 3: Aza Stains
Tsy misy zavatra hafa manelingelina noho ny maka fotoana be dia be ny hisafidy ny zavatra fitafiana halehanao haka mba hahita anareo ihany no tsy afaka mampiasa azy ireo na dia! Aza manana izany olana indray. Voalohany dia tokony ho azo antoka foana ny fahazavanao akanjo miloko no feno ao anatin'ny avy, ary faharoa, hihazona ny trano fandraisam-bahiny fanary fandroana satroka ary hampiasa izany mba handrakotra ny pototry ny kiraro.
Soso-kevitra 4: Roll Ary Vacuum Pack
Mba hamonjy toerana ary intsony creasing, mihodina ny akanjo fa tsy famoretana azy ireo, dia apetraho azy ireo amin'ny vacuum kitapo famatrarana. Mba mampiasa ireo kitapo, ataovy ny fitafiany in, asio tombo-kase ny kitapo, dia manenjika ny rivotra avy. Izany dia handao anao betsaka kokoa ny toerana ao amin'ny valizy ka hisakana creases.
Soso-kevitra 5: Safety entana
Hanidy ny kitapo ka mitandrina azy mihidy. Ento miaraka aminao izy ireo rehefa mampiasa ny trano fivoahana. Raha izany no tsy azo atao, ary ianao no mandeha irery, mitondra zavatra rehetra manan-danja aminao. Tsy handao fakan-tsary, vola, fitaovana elektronika, na antontan-taratasy Travel niambina.
Ataovy ny mampitohy mihidy raha matory ianao, raha azo atao. Aza matoky olona hafa firenena. Na ny akanjo tsara vahiny Mety hitodika avy ho mpangalatra. Raha toa ianao ka matory ao amin'ny dia lavitra Nisy toerana iray tsy fantatrao, aza hadinoina ny matory eo an-tampon'ny ny vola fehin-kibo, mba ho tsikaritrao raha misy mitady haka azy ho afaka aminao.
Soso-kevitra 6: Ampiasao fonosana Cubes
” Tsy misy zavatra maro izay mahatonga ahy hahatsapa toy ny olona voalamina toy mizara ny fananany ao an-kolaka izany loko cubes. Tena mahafinaritra ny mahafantatra tsara ny zava-drehetra izay nentinao dia raha vao ianao unzip ny valizy. Plus, dia afaka mora foana tena mihetsika ny fonosana cubes eo an-mpantsaka ny trano fandraisam-bahiny, ary avy hatrany Dresser hatao unpacking sy vonona ny handeha.” - Richelle Szypulski, Senior Associate Editor
Soso-kevitra 7: Size Famerana solon'ny tanana entana
Mitovy amin'ny fiaramanidina, maro fiarandalamby manana famerana ny vola sy ny haben'ny ny kitapo izay efa navela hanohy. Amin'ny ankapobeny, ianao dia ho afaka hanohy ny entana rehetra, fa ny fiaran-dalamby dia mety mitaky mitondra anao hijery ny tafahoatra entana ao amin'ny hetsika dia mihoatra hanohy ny habeny na ny lanjany faneriterena. Ho an'ny ankamaroan'ny fiarandalamby, dia afaka mitondra roa kitapo tao anatiny ny fiaran-dalamby, raha mbola kitapo tsirairay tsy hihoatra 50 lbs na dia lehibe kokoa noho ny 28 X 22 X 14 santimetatra. Madinika sy zavatra manokana toy ny fitaovana ara-pitsaboana sy ny fanafody, ondana, bodofotsy, coolers, sy ny poketra na kitapo latsaka noho 12 X 12 X 12 santimetatra dia tsy ho isaina nanatrika ny hanohy entana fetra.
Soso-kevitra 8: Gadgets In Hand entana
Ahoana no matetika handamina ny elektronika rehetra, telegrama, fiddly potika ireo izay hitondra anao taona mba mihady avy amin'ny fiarovana? Zavatra azy ireo toy ny sasany isika? tsara, raha te-handamina ny tananao entana avy eo ianao mahazo ny stash ny ziplock kitapo. Phone dovia, fakan-tsary dovia, adapters, écouteur - handray fanampiny harona plastika (mitovy ireny dia ho ampiasaina amin'ny tanana entana ranon-javatra) ary hampiasa azy ireo mba hitahiry zavatra herinaratra, zavatra ny dia an-trano (trano fanalahidy, fijanonana tapakila, sy ny fiara fanalahidy), fanafody sy ny hafa hamaha Accessories.
Soso-kevitra 9: Ahoana no To tsy mody Books. Aza!
Na dia izany mafanan'ny olon-tiany tantara, mampientam-po Sci-Fi, na ny alika sofina Travel Guide, download izany mialoha ny diany. Na dia ao an-trano ianao taratasy till I die-karazany, afa-tsy ny toerana sy ny lanjan'ny entana sy ny tananao aza matoky Wifi mba hitsambikina indray ny tantara avy amin'ny tora-pasika tsara napetraka seza, fotsiny ho azo antoka fa amin'ny rano mahatohitra nandrakotra fitaovana.
Soso-kevitra 10: Lay Rehetra Out
Mahafantatra ny korontana faran'izay aho. Ekeko izany. ary rava! Fa inona no manampy ahy hahazo ny lohako mahitsy na dia I entana amin'ny minitra farany indrindra, Izaho maka fotoana mba hametrahany ny zava-drehetra teo anatrehan'i misy zavatra mandeha ao amin 'ny kitapo. Grouping zavatra miaraka Teo am-pandriako Manampy ahy hahita haingana izay zavatra tsy mitarika ny lanjany. Pataloha izay afaka ihany no azo hanaovana iray ambony, na dia mitaky tsy kiraro aho efa mikasa ny entana? Tamin'ny ny mpantsaka, mandeha ianao! Mahita mazava tsara ny zava-drehetra, alohan'ny manampy ahy hanomboka koa antonona eo an-kitapo ny zavatra amin'ny fomba mirindra. Ho ahy, izany dia midika hoe manomboka miaraka amin'ny bulkiest entana, serizy dia maivana maka zavatra mba tuck ho banga nanodidina azy ireo mba hanangana ny fototra matanjaka sosona mba hanangana avy.
Manana toro-hevitra ireo nanampy anao mahatakatra ny fomba handaminana ny tananao entana? Tsy ho tia ho fantatra! Boky ny tapakila amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby Save A Train ka hanaikitra Picks tananao entana rehefa avy mampiasa ireo toro-hevitra!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Soso-kevitra fomba handaminana ny Hand entana” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-organize-hand-luggage%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)